Xog: Aqriso liiska magacyada saraakiisha Al-Shabaab ee wadahadalka la furay DF - Hablaha Media Network
Xog: Aqriso liiska magacyada saraakiisha Al-Shabaab ee wadahadalka la furay DF
HMN:- Waxaa maalmihii ugu dambeeyey aad loo hadal hayey saraakiil ka tirsan ciidamada Al-Shabaab oo isku soo dhiibi rabo dowladda Soomaaliya.
Haddaba caasimadda online oo ah shabakad aad uga barateyn inay idiin soo gudbiso wararka qarsoon ayaa si hoose u heshay liiska saraakiisha ka tirsan Al-Shabaab ee wadahadalka kula jirto dowladda Soomaaliya si ay isku soo dhiibaan.
Xogtaan oo ay Caasimadda ka heshay illo wareedyo ku dhaw dhaw Dowladda ayaa sheegayo inay jiraan liis tiro badan oo ay ku qoran yihiin magacyada saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay gacanta dowladda.
Saraakiishaan ayaa hadda wadahadal toos ah la leh dowladda Soomaaliya waxaana laga yaabaa inay maalmaha soo socdo isku soo dhiibaan dowladda Dhexe ee Soomaaliya iyadoo arrintaas loo marayo maamul Goboleedyada dalka ka jiro.
Haddaba halkaan hoose ka aqriso liiska saraakiisha ka tirsan ciidamada Al-Shabaab ee wadahadalka ku jiro dowladda Soomaaliya.
Sheekh Raage Aweys Axmed
Muumin (Bin Cali)
Sheekh Muumin Maxamed
Cali Axmed (Abuu Seynab)
Axmed Luga Togane
Sakariye Sheekh Khadar
Yuusuf Axmed Ducaale (Abuu Cabdalla)
Nuur Jeylaane Macow
Sheekh C/casiis Nuur Axmed
Tan iyo markii uu Maxamed Cabdulaahi Farmaajo la wareegay maamulk Soomaaliya waxaa soo baxayey warar sheegayo inay isisoo dhiibeyn qaar badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo weliba intooda badan lagu soo bandhigay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed.
Wixii warar ah ee kusoo kordha arrintaan waan idinla wadaagi doonaa Inshaa Allah